China Abavelisi bovavanyo olukhawulezayo lwe-FOB kunye nabathengisi | Umda weBio
IStrongStep®Umtya wovavanyo olukhawulezileyo we-FOB (ilindle) kukubonwa okukhawulezayo kokubonwa komgangatho wokuchongwa kwehemoglobin yomntu kwimifuziselo yelindle yomntu. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni izifo ezisezantsi zesisu (gi).
Umhlaza ongacacanga yenye yezona zinto zixhaphakileyo zomhlaza kunye nesona sifo siphambili ekubulaweni komhlaza e-United States. Ukuvavanywa komhlaza obala ngokungathandabuzekiyo kunokwenzeka kwonyuse ukufunyanwa komhlaza kwinqanaba lokuqala, ke ngoko kunciphisa ukubhubha.
Uvavanyo lwe-FOB lwangaphambili lwentengiso lwalusebenzisa uvavanyo lwe-guaiac, olufuna ukuthintelwa okhethekileyo ekutyeni ukunciphisa iziphumo ezibi ezingezizo nezobuxoki. I-FOB Rapid Test Strip (ilindle) yenzelwe ngokukodwa ukufumanisa i-hemoglobin yomntu kwiisampuli ze-fecal zisebenzisa iindlela ze-Immunochemical, eziphucule ubume bokufunyanwa kwesisu esisezantsi. ukuphazamiseka, kubandakanya i-colorectal cancer kunye ne-adenomas.
I-FOB Rapid Test Strip (ilindle) yenzelwe ukufumanisa i-hemoglobin yomntu ngokuchazwa ngokubonwayo kokukhula kombala kumtya wangaphakathi. Inwebu yayihambile kwimithambo-luvo ye-hemoglobin anti-human kwingingqi yovavanyo. Ngexesha lovavanyo, isampuli iyavunyelwa ukuba iphendule ngee-anti-human hemoglobin antibodies ze-colloidal zegolide ezihlanganisiweyo, ezazenziwe zangqinwa kwisampulu yovavanyo. Umxube ke uhambisa inwebu ngesenzo se-capillary, kwaye unxibelelane nee reagents kwi-membrane. Ukuba ihemoglobin yomntu ibanele kwii-specimens, ibhendi enemibala iyakwenziwa kwindawo yovavanyo lwembrane. Ubukho beli bhanti linemibala kubonisa iziphumo ezilungileyo, ngelixa ukungabikho kwalo kubonisa isiphumo esibi. Ukubonakala kwebhendi enemibala kwindawo yolawulo kusebenza njengolawulo lwenkqubo. Oku kubonisa ukuba ivolumu efanelekileyo yesampulu yongezwe kwaye i-membrane wicking yenzekile.
■ Ukulungiselela ukusetyenziswa kwe-vitro diagnostic kuphela.
■ Sukuyisebenzisa emva komhla wokuphelelwa kwayo oboniswe kwiphakheji. Sukusebenzisa uvavanyo ukuba isikhwama se-foil sonakele. Sukuphinda usebenzise iimvavanyo.
This Le khithi ineemveliso zezilwanyana. Ulwazi oluqinisekisiweyo ngemvelaphi kunye / okanye imeko yococeko lwezilwanyana akuqinisekisi ngokupheleleyo ukungabikho kweearhente ezinokuhanjiswa. Kuyacetyiswa ke ngoko ukuba ezi mveliso ziphathwe njengezinokusulela, kwaye ziphathwe ngokujonga amanyathelo okhuseleko aqhelekileyo (umzekelo, sukungenisa okanye ukungenisa).
■ Kunqande ukungcoliseka kweesampuli ngokusebenzisa isikhongozeli esitsha sokuqokelela isampuli kwisampuli nganye efunyenweyo.
■ Funda yonke inkqubo ngocoselelo phambi kovavanyo.
■ Ungatyi, ungaseli okanye utshaye nakweyiphi na indawo apho kulawulwa khona iisampulu neekiti. Phatha zonke iisampulu ngokungathi ziqulethe izinto ezosulelayo. Gcina izilumkiso ezichongiweyo ngokuchasene neengozi ze-microbiological kuyo yonke inkqubo kwaye ulandele iinkqubo ezisemgangathweni zokulahla ngokufanelekileyo iisampulu. Nxiba iimpahla zokuzikhusela ezifana neebhatyi zelebhu, iiglavu ezilahlwayo kunye nokukhuselwa kwamehlo xa kulingwa.
The Isampuli yokuxutywa kwesampulu iqulathe i-sodium azide, enokuthi isabele nge-lead okanye nge-plumbing plumb ukwenza i-azides ezinokuba nesiqhushumbisi. Xa ulahla i-specimen dilution buffer okanye iisampulu ezikhutshiweyo, soloko ugungxula ngamanzi amaninzi ukukhusela i-azide buildup.
■ Musa ukutshintshiselana okanye udibanise izixhobo ezenziwe ngee-reagents kwiindawo ezahlukeneyo.
■ Ukufuma kunye nobushushu bunokuchaphazela kakubi iziphumo.
■ Izinto zokuvavanya ezisetyenzisiweyo kufuneka zilahlwe ngokwemigaqo yengingqi.
Egqithileyo Trichomonas vaginalis kunye neCandida
Okulandelayo: Isisombululo sokudibanisa i-Fungal
Isixhobo sovavanyo esikhawulezayo seFob
H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi,